एउटा ‘रियल प्लेयर’लाई टेलिकम क्षेत्रमा आउन नदिएर सरकारले गल्ती गर्दैछः निर्वाण चौधरी |
कर्पोरेट नेपाल , ४ भाद्र २०७६, बुधबार ५ भाद्र २०७६, बिहीबार
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा परिचित नेपालका एक मात्रै अर्बपति विनोद चौधरीले नेतृत्व गरेको चौधरी समूहले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्दै दूरसञ्चार क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानीको तयारी गरेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिटमा सरकारले नै सहजीकरण गरि सीजी टेलिकमले २५ अर्ब लगानीको घोषणा गरेको थियो । तर, समिटपछि सरकारले चौधरी ग्रुपलाई सहजीकरण होइन, अवरोध पुर्याइरहेको अवस्था देखिन्छ । लगानी गर्न पैसा हातमा लिएर बसिरहेको ग्रुपलाई लगानी गर्ने वातावरण नदिने तर लगानी बढ्न सकेन भनेर सरकारका मन्त्रीहरूले भाषण गरिरहेका छन् । सीजीलाई टेलिकममा लगानी गर्ने वातावरण बनाए टेलिफोन तथा डेटा शुल्कमा आधाले सस्तो हुने चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरी बताउँछन् । तर आफूलाई लाइसेन्स दिन रोक्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए । प्रस्तुत छ चौधरीसँग कर्पोरेट नेपालका सम्पादक सीताराम विलासीले गरेको कुराकानीको सारः
चौधरी समूहको एक शताब्दीभन्दा लामो व्यवसायिक इतिहास छ । तपाईं त्यसको पछिल्लो पुस्ता । यो व्यवसायिक इतिहासलाई तपाईंले फर्किएर हेर्दा कसरी हेर्नुहुन्छ ?
व्यवसाय गर्ने एउटा व्यवसायी भएकोले मुलुकको अर्थतन्त्र योगदान दिनु हाम्रो स्वाभाविक जिम्मेवारी हो । तर पनि हामीले यति योगदान गर्यौं भनेर देखाइरहन चाहान्नौं । हामीले देखाइरहनु नै पर्दैन । आम जनताले देखिरहेकै हुन्छ । मूल्यांकन गरिरहेकै हुन्छ । काम गर्दै जाने हो । कम्पनीहरुको ग्रोथ हुँदै जान्छ । चौधरी ग्रुप पछाडि फर्किएर सोच्ने भन्दा पनि अगाडि कसरी बढ्ने ? भन्ने सोचमा हुन्छ ।
तपाईंको बुबा (विनोद चौधरी) नेपालको बिलेनियरको रुपमा विश्वभर परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले अझै अघि बढ्ने सपना पनि देख्दै आउनुभएको छ । तपाईं उहाँको एउटा उत्तराधिकारी पनि भएकाले उहाँको लिगेसीलाई कसरी सम्हालेर लैजादै हुनुहुन्छ ?
चौधरी ग्रुप भनेको एउटा प्रोफेशनल ग्रुप हो । हरेक डिभिजन, हरेक भर्टिकल, हरेक कम्पनीको आफ्नै सिइओ, आफ्नै टिम, कोर टिमहरु छ । बुबाको के भिजन छ भने– विश्वभर गएर नेपाली कम्पनीले पनि काम गर्नसक्छ भनेर सावित गर्ने । उहाँको त्यही भिजन र गोलमा हामी पनि अघि बढ्ने हो । साथ दिने हो । बुबाको भन्दा फरक भिजन मेरो छैन् । कसरी नेपालमा विजनेश ग्रो गर्ने ? लगानी गरिसकेपछि आफ्नो प्रोफिट मात्रै होइन्, सोसाइटीलाई पनि बेनेफिट कसरी गर्ने ? त्यो मात्रै सोचाई हाम्रो छ । दश बर्षअघि कसरी लार्जेष्ट कम्पनी बन्ने ? भन्ने गोल थियो भने अहिले कसरी लगानी गरेर वेल्थ क्रियशन गर्ने ? सँगसँगै सीएसआरको माध्यमबाट समाजलाई पनि कसरी लाभान्वित गर्ने ? भन्ने छ ।
अहिले देखिएको तपाईंहरुको मुख्य व्यवसायमा फुड नै छ । वाईवाई मुख्य ब्राण्डको रुपमा देखिएको छ । तर अब व्यवसाय डाइभर्सिफिकेशन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । कसरी अघि बढ्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले तपाईंले हेर्नुभयो भने १६ वटा भर्टिकल्स छ ग्रुपको । हाम्रो ग्रुपको मुख्य तीन वटा भर्टिकलमा पहिलो भनेको फुड नै हो । वाईवाई, ब्रुअरी, स्न्याक्स आदि । सेकेण्ड भनेको फाइनान्सियल सर्भिसेज भयो । तेस्रो भनेको हस्पिटालिटी अर्थात होटल्स हो । गएको पाँच बर्षमा हामीले नेपालमा मात्रै पाँच वटा होटल खोलिसक्यौं । नेपालमा थप खोल्नलाई बजार पनि तयार हुनुपर्यो । त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने अर्को पाँच बर्ष हाम्रो कोर विजनेश भनेको फुड अर्थात वाईवाई नै रहन्छ । दोस्रो हामीलाई सरकारले टेलिकममा आउन दियो भने त्यो अर्को महत्वपूर्व विजनेश हुन्छ । हामी मात्र त्यस्तो एक मात्रै कम्पनी हौँ जसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता एक पैसा पनि बाँकी राखेको छैन् । हामीले प्रक्रिया पूरा गरेको बर्षौं भइसक्यो । टेलिकममा अहिले पनि मनोपोली छ । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा हाईयेष्ट टेलिकम रेट नेपालमा छ । सबैभन्दा मिनिमम् डेटा पेनिट्रेशन भनेकै नेपालमा हो । मिनिमम् स्मार्टफोन पेनिट्रेशन पनि नेपालमै हो । मोनोपोली ढंगले एउटा कम्पनीले प्रोफिटाबिलिटि कमाइरहेको छ । यसले नेपालको डिजिटल इकोनोमोमा आघात पुगिरहेको छ । अहिले इण्डियामा जिओ आएर कसरी चेन्ज आइरहेको छ ? हेर्नुस त । त्यही खालको सोच बनाएर हामी आउन लागेको हो । हामीलाई नै रोकेपछि त यो देशको विकास कसरी हुन्छ ? भर्खरै पैसा नतिर्ने एउटा टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरियो । अरु कतिपय पैसा नतिरी बसिरहेको अवस्था छ । उनीहरु कहाँ छन् ? हेर्नुस । उनीहरु टेलिकम कम्पनी चलाउन आएको त होइन रैछ । लाइसेन्स पाएको ४–५ बर्ष भइसक्यो । खोई त काम सुरु गरेको ? भनेपछि एउटा ‘रियल प्लेयर’लाई अगाडि आउन नदिन सरकारले जुन बाताबरण बनाइरहेको छ, त्यो कुराले हामीले आश्चर्यमा परेका छौं ।
रोक्यो भन्नुभयो । तपाईंहरुलाई रोक्ने खास को हो ? भन्नु न ।
हामी आयौं भने अरुको लाइसेन्स बिक्दैन । हामी आयौं भने अरु कम्पनीको प्रोफिट्याबिलिटि कम हुन्छ । हामी आयौं भने नेपाली पिपुलले सस्तोमा सर्भिस पाउनुहुँन्छ, डिष्ट्रिक्टिक मोडलमा जनतालाई फाइदा हुन्छ । तर सरकारले किन जनताको पक्षमा काम गर्न नचाहेको हो ? भन्ने कुरा उतै सोध्नुपर्छ । गएको लगानी सम्मेलनमा हेर्नुस, आठवटा डिल भएको थियो । हामीले भनिरहेका छौं कि बाहिरबाट मानिसहरुलाई बोलाउनुभन्दा पहिला आफ्नै कम्पनीहरुको प्रोबोलम के छ ? त्यो पो बुझ्नुपर्यो नि । त्यसलाई समाधान गर्नुपर्यो नि । यहीको समस्या समाधान भएको छैन् । बिग्रिएको बिग्रियै छ । बाहिरको लगानीकर्ता बोलाएर को आउँछ ? त्यति हुँदाहुँदै पनि लगानी सम्मेलनमा आठ वटा डिलमा छ वटा डिल कस्ले गर्यो ? सिजीले गर्यो नि ।
ती समझदारीहरु कुनै पनि अघि बढेको छैन् ?
छैन नि । एउटा टेलिकमको थियो । त्यो फाईल सिंहदरबारको घर्रामा राखेको बर्षौं भइसक्यो । सोलार प्रोजेक्टको लागि हरेक प्रदेशमा न्यूनतम् वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने अवस्था छ । कुनै काम अघि बढेको छैन् । लजिष्टिकको अहिलेको पोलिसी नै अहिलेसम्म बनेको छैन् । यस्तो कुरामा साइन गरेर हल्ला गर्नुभन्दा अघि नै फण्डामेन्टल कुरा नै तयार हुन्न भने हल्ला गर्नुको मतलव नै भएन् ।
भनेपछि चौधरी ग्रुपलाई नै लक्षित गरेर असहयोगको काम भइरहेको अवस्था हो ?
हामीलाई त्यस्तै फिल हुन्छ । हामीलाई हरेक क्षेत्रमा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । बाताबरण त्यस्तै बनाइएको छ । हामीलाई गाह्रो नै गराइएको हो भन्ने लागिरहेको छ । होइन भने त हाम्रो सिजी टेलिकम तीन बर्ष अघि नै आउनुपर्ने हो । रोक्नुपर्ने कारण के हो ? हामीले गल्ती के गरेका छौं ? रुल मानेका छैनौं भने देखाउनुपर्यो । तपाईंले एनटीए (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण)को चेयरमेनलाई सोध्नुस् । त्यहाँको हरेक बोर्ड मेम्बरलाई सोध्नुस् । उहाँहरु भन्नुहुन्छ, ‘सिजीले त बर्र्षांैंअघि लाइसेन्स पाउनुपर्ने हो ।’ तर खोई त ? हामीले त बेटर गर्न लागेको हो । किन हामीलाई रोक्नुपर्यो ? कस्को कारणले रोक्नुपर्यो ? कारण भन्नुपर्दैन ?
तपाईंहरुले टेलिकममा अझै रोकिराखियो, अघि बढ्नै दिइएन भने चौधरी ग्रुप के गर्छ ?
हामी नेपाली कम्पनी भएकाले हाम्रो ड्युटी भनेको नेपालमा नै लगानी गर्ने हो । आज बाताबरण ठिक नभए पनि भोलि ठिक होला । बुझ्ने लिडरशीप आउला । त्यो बेलामा लगानी गरौंला । छेकेको छेक्यै गरे पनि, हात बाँधे पनि हामी कहीं जानेवाला छैनौं । हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्न छोड्दैनौं । अहिलेको लिडरशीपलाई पनि कुनै दिन फिल होला सिजीलाई रोकेर मुलुकप्रति, जनताप्रति गलत गर्यौं । किन भने यस्ता कुराहरु पब्लिकले पनि वाच गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको नेपाली भनेको धेरै सचेत र एनालाइसिस गर्नसक्ने भइसकेको छ ।
तपाईंहरुले जुन ७० अर्ब लगानी गर्ने इच्छा देखाइरहनुभएको छ, त्यो कुन कुन क्षेत्रमा कति हो ?
टेलिकममा २५ अर्बको छ । सोलारमा ३०–४० अर्ब छ । लजिष्टिक पार्टमा पाँच अर्ब छ । अरु हाम्रो ब्रुअरी र सिमेन्टको एक्सपान्शन २० अर्बको छ । सिमेन्टबाहेक अरु सबै रोकिएको अवस्था छ । यो त हामीले पहिले नै लाइसेन्स लिएर, माइन लिएर अघि बढाइरहेका छौं । जे जे मा गर्भमेन्टले रोकेको छैन्, त्यसमा हामी अघि बढिरहेका छौं । नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्ने, नयाँ एप्रुभल दिनुपर्नेमा सबै रोकिदिएको छ ।
तपाईंले सिजी टेलिकम आएपछि बेटर सर्भिस हुन्छ भन्नुभयो । अहिले दिइरहेको सर्भिसभन्दा कति बढि सस्तो हुन्छ ?
जे हिसावले जिओ आयो नि इण्डियामा, हाम्रो त्यही मोडल हुन्छ । हामीहरु एटलिष्ट आधाले सस्तो सेवा उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ । यस्को फाइदा कस्लाई हुन्छ ? भन्नु त । जनतालाई हुन्छ नि । सबैको हातमा डेटाको एक्सेज भयो भने त कयौं नयाँ इन्डिष्ट्रिजहरु खुल्छ ।
चौधरी ग्रुप टेलिकिममै आकर्षित हुनुको कारण के हो ?
टेलिकम यस्तो ग्रोइङ सेक्टर हो कि हाम्रो दैनिक जीवन जे हिसावले अघि आइरहेको छ, ती सबैको ब्याकबोड हो । आज हामीले लाइट अन गर्न गछौं । भोलि डेटाले लाइट अन गर्न थाल्छ । अपरेशन रिमोर्टले हुन थाल्छ । अब हरेक सेक्टरको ब्याकबोन अफ इन्फ्रास्टक्चर भनेको टेलिकम हो । जे हिसावमा इकोनोमी अघि बढ्छ, त्यसको इन्फास्टक्चरका लागि हाइवे बनाउनु जरुरी छ । एउटा त नेसेसिटी पनि हो । अर्को भनेको अपरच्युनिटी पनि हो । तर बिडम्बना एउटा कम्पनी हेर्नुस मोनोपोली गरिहेको छ । अरु कम्पनीहरु त्यसैसँग लिङ्क भएर बसिरहेका छन् । एउटा गर्भमेन्टको कम्पनी छ । बाँकी कोही छैन् । आजको दिनमा टेलिकम भनेको लक्जरी होइन् । नेसेसिटी हो । नेसेसिटीलाई नै दबाएर राखेर जनतालाई महंगो सेवा लिन बाध्य पारियो भने राम्रो हुँदैन नि ।
टेलिकम्युनिकेशन विजनेश धेरै प्रोफिटेवल विजनेशको रुपमा हेरिन्छ विश्वमै । तपाईंहरु विलेनियरको पोर्टफोलियो बढाउने प्रयासमा पनि हुनुहुन्छ । टेलिकममा लगानी गर्दा पोर्टफोलियो बढाउन सहयोग पुग्ने देखेर यसमा लगानी गर्न खोज्नुभएको हो कि ?
वल्डवाइड त्यस्तो धेरै प्रोफिटेवल मानिन्न । तर नेपालमा चाहीं अहिले होला । त्यस्तो बढाउन त अरु दर्जन सेक्टरहरु छन् । हाइड्रोपावरमै अझै बढि फोकस भइन्थ्यो होला । अहिले मानिसहरुले गर्भमेन्टसँग सेटिङ गरेर टेण्डरको काम गर्छ नि, हामी पनि त्यहीं लाग्थ्यौं होला । पैसा त्यहाँ पनि छ । टेलिकममा हाम्रो विजनेश इन्ट्रेष्ट भनेको २० प्रतिशत मात्रै हो । मुख्य कुरा हामी टेलिकममा आउन खोज्नुको कारण सर्वसुलभरुपमा टेलिकम्युनिकेशन सर्भिस पाउनुपर्ने नेपाली जनताको राइट्स छ, त्यसलाई ब्रिज गर्नका लागि हो ।
चौधरी ग्रुपलाई एउटा आरोप पनि के छ भने उद्योगमा भन्दा व्यापारमा बढि फोकस हुन खोजेको, स्वदेशमा भन्दा विदेशमा लगानी गर्न खोजेको । के भन्नुहुन्छ ।
यो पूर्णरुपमा असत्य हो । समय समयमा मिडियामार्फत पनि हामीले हाम्रो बारेमा भनिरहेका छौं कि ८० प्रतिशतभन्दा बढि लगानी हाम्रो नेपालमा नै छ । भविश्यमा पनि रहने छ । बाहिर वाईवाईको ग्रोथ कम्पेरेटिभ एडभान्टेजको ग्रोथ हो । तर लगानीका हिसावले ८० प्रतिशत लगानी नेपालभित्रै छ ।
हुन त तपाईंले अघि सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुभयो । तर अहिले त स्थिर सरकार छ । त्यो पनि दुईतिहाईको । त्यसको अनुभति तपाईंहरुलाई हुन सकेको छैन् ?
स्टेबल संसदभित्र होला । बाहिर छैन् । कर्पोरेट विजनेश इन्भाइरोमेन्ट सिर्जना हुन सकेको छैन् ।
पहिलाको भन्दा पनि अहिले समस्या हो र ?
अहिले जस्तो समस्या मैले फेस गरेको छैन् पहिला । हाम्रो ग्रुपले फेस गरेको थिएन । सरकारले हामीप्रति गरेको व्यवहारभन्दा पनि विजनेश सेक्टरलाई ल्याएको पोलिसीले गाह्रो पारिरहेको छ । जसले राम्रो गरेको छ, उसलाई पेलौं । एक्दमै एक्सट्रिममा गइरहेको छ । त्यसले के सन्देश दिन्छ ? भन्नु त । देशकै लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न नआए बाहिरको कसरी आउँछ ? मान्छे नेपालमा किन लगानी गर्न आउने ? बाताबरण नै छैन् भने कसरी आउँछ ? इम्प्वाइमेन्ट रेगुलेशन, इन्भेष्टमेन्ट रेगुलेशन सबै हुनुपर्यो । अनि पो विजनेश रन हुन्छ । अनि प्रोफिट हुन्छ । मार्केट यति सानो छ यहाँ । छेउमा चाइना र इण्डिया छन् । बरु इण्डिया वा चाइनामै गएर विजनेश सेटअप गर्छ । कम्तिमा त्यहाँ लगानीको बाताबरण छ । हामीले अरु केही मागेको पनि होइन फेरि । लेवर प्लेइङ इन्भाइरोमेन्ट बनाइदेउ भनेको मात्रै हो ।
टेलिकमकै कुरा गरौं । टेलिकममा लगानी गर्दैगर्दा त्यसका लागि आवश्यक तयारी या भनौं पूर्वाधार पनि चाहिएला । तपाईंहरुले त्यो पूर्वाधार तयार गरिसक्नु भएको अवस्था हो ?
हामी धेरैहदसम्म रेडी छौं । ह्वावेसँग कोल्याब्रेशन भइसक्यो । हाम्रो टिममा पनि टकसेलको मानिसहरु आइसक्नुभएको छ । त्यसकारणले मलाई लाग्छ ह्वावे जस्तो कम्पनीको रोलआउट र हाम्रो आफ्नो ग्रुपको सेल्स एण्ड मार्केटिङको क्षमतालाई लेभरेज र क्यापिटलाइज गरेर अघि बढ्न सक्छौं ।
यदि सरकारले सिजी सेललाई लाइसेन्स दिइहाल्यो भने कति समयमा सर्भिस दिनसक्नुहुन्छ ?
सरकारले लाइसेन्स दिएको नौ महिनामा हामीले जनतालाई सेवा दिन तयार छौँ ।
तपाईंहरुको सरकारी पक्षसँग यी विषयमा कुरा त भइरहेको होला नि ?
धेरै पटक भेटेका छौं । अनुरोध गरेका छौं । सुनुवाई भएको छैन् । सबैले सर्टटर्म फाइदा खोजेर लङटर्म र लार्जर गेम बिगार्ने काम भएको छ । हामीले ल्याउने टेलिकमको रेटले नै मुलुक नै कहाँ पुग्थ्यो । कन्जुमरलाई कति फाइदा हुन्थ्यो । त्यो कस्ले बुझाइदिने ?
ओली हेलिकप्टर लिएर शास्वतधाम दर्शन गर्न पुगे